Bit By Bit - Mass iskaashi - 5.2.3 Gunaanad
Xisaabinta Human awood aad u leedahay kun caawiyeyaasha cilmi.
mashaariicda xisaabinta Human isku shuqulkii badan-khubarada aan ahayn si ay u xaliyaan dhibaatooyinka fudud-hawl-weyn oo baaxad in si fudud oo aan xalin by kombiyuutarada. Waxay isticmaalaan kala-dalban-geeyo istaraatijiyad in ay jebiyaan dhibaato weyn gelin badan oo micro-hawlaha fudud in lagu xallin karo by dadka aan xirfadaha gaarka ah. jiilka labaad nidaamka xisaabinta aadanaha sidoo kale u isticmaali waxbarashada mishiinka si ay u xoojin dadaalka aadanaha.
In cilmi bulshada, mashaariic xisaabinta aadanaha u badan tahay in lagu isticmaalo xaaladaha ay cilmi doonayaan in ay kala saaraan, code, ama images calaamad, video, ama qoraalka. kala saaro Hadalladaasu ma aha kuwa dhammaado, ay yihiin alaabta ceeriin cilmi. Tusaale ahaan, waxay dadkii badnaa-sireed ee manifestos siyaasadeed loo isticmaali karaa si ay u tijaabiso aragtiyaha ku saabsan dhaqdhaqaaqa of dareenka xagga socdaalka.
Si loo sii dhisi aad dareen, Shaxda 5.1 siiyaa tusaalayaal dheeraad ah oo ku saabsan sida xisaabinta aadanaha ayaa loo isticmaalay cilmi bulsho. miiska Tani waxay muujinaysaa in, ka duwan Galaxy Zoo, mashaariic badan oo kale xisaabinta aadanaha u isticmaali suuqyada micro-hawsha shaqada (tusaale ahaan, Amazon Farsamada Turk). Waxaan arrintan of qaybgale dhiirogelin ku noqon doonaa markii aan u bixiyaan talo ku saabsan abuuro mashruuc iskaashi mass adiga kuu gaar ah.
Shaxda 5.1: Tusaale mashaariic xisaabinta aadanaha ee cilmi bulsho.
sireed manifestos xisbiga text suuqa shaqada micro-hawsha Benoit et al. (2015)
Macdan macluumaadka dhacdo ka articles news on the Dibad baayacmushtara in 200 magaalooyinka US text suuqa shaqada micro-hawsha Adams (2014)
dirka articles wargeyska text suuqa shaqada micro-hawsha Budak, Goel, and Rao (2016)
saarida macluumaadka dhacdo ka koobeynaa askari ee Dagaalkii Adduunka 1 text iskaa wax u qabso Grayson (2016)
ogaado isbedel ku maps images suuqa shaqada micro-hawsha Soeller et al. (2016)
Ugu dambeyntii, tusaalooyin ah in this qaybta show in xisaabinta aadanaha yeelan karaan saamayn ah dimuqraddiyad on sayniska. Xusuuso, in Schawinski iyo Lintott ahaayeen arday ka qalin markii ay bilowday Galaxy Zoo. Ka hor da'da digital, mashruuc si kala soocidda million Galaxy ah ayaa loo baahan yahay wakhti aad u badan iyo lacag in kaliya ay noqon lahaayeen kuwa wax ku ool ah, waayo si fiican u maal-galiso iyo Professor bukaanka. Taasi mar dambe run. mashaariicda xisaabinta Human isku shuqulkii badan-khubarada aan ahayn si ay u xaliyaan dhibaatooyin baaxad sahlan-hawl-weyn. Next, waxaana idin tusin doonaa in iskaashi ballaaran ayaa sidoo kale lagu saleyn karaa dhibaatooyin u baahan khibrad, khibrad in xitaa cilmi nafteeda laga yaabaa in aysan haysan.